Kaalmo cusub oo uu Mareykanka ugu talo-galay Afghanistan
Bishii April 14-keeda, madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhowaaqay in dowladda Mareykanka shaqaalaheeda militari ee ugu dambeeya ay Afghanistan kala soo bixi doonto ugu dambeyn 11-ka September 2021. Si kastaba, madaxweyne Biden waxa uu sharxay in inkasta oo dowladda Mareykanka ay joojin doonto ku lug lahaanshaheeda militari ee Afghanistan, haddana kaalmada Mareykanka ay sii socon doonto.
“Waxaan sii wadi doonnaa inaan taageerno dowladda Afghanistan. Waxaan sii wadi doonnaa inaan caawimaad siino ciidamada Difaaca iyo Amniga Qaranka Afghanistan,” ayuu yiri Biden.
Bishii June 4-teeda, Xoghayaha Arrimaha Dibedda Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku dhowaaqay in ayada oo ay qeyb ka tahay ballan-qaadka loo sameeyey shacabka Afghanistan, in dowladda Mareykanka ay bixin doonto 266 milyan oo dollar, oo ah kaalmo bani’aadannimo oo cusub.
“Caawimaddan ka timid shacabka Mareykanka waxay gacan ka siin doontaa saaxiibadeena bani’aadannimo ee caalamiga ah inay taageeraan qiyaastii 18 milyan oo qof oo u baahan oo ku suagn Afghanistan, oo ay ku jiraan in ka badan 4.8 milyan oo ah Afghaaniyiin ku barakacay gudaha dalka,” ayuu yiri xoghaye Blinken.
“Sanadkan kaliya, in ka badan 115,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaallo ka dhacay gudaha dalka Afghanistan, qiyaastiinta 500,000 oo ku laabtay Afghanistan ayaa u baahan caawimaad.”
Lacagtan ayaa hooy, fursado shaqo, daryeelka caafimaad ee aas-aasiga ah, cunno deg deg ah, biyo, nadaafad iyo jawaabaha COVID-19 siin doonta shacabka Afghanistan.
“Waxaa intaas dheer, kaalmadan waxay gacan ka gaysan doontaa wax ka qaabshada badbaadinta ay u baahan yihiin kuwa ugu baylahan Afghanistan. Waxaa tani ku jira haween iyo gabdho wajahaya halis gaar ah, oo ay ka mid yihiin rabshado ku saleysan jinsi, oo ka dhashay cudurka COVID-19 iyo tobaneeyo sano oo dagaal ah,” ayuu yiri Blinken.
“Sanado badan, dowladda Mareykanka waxay ahmiyad gaar ah siisay taageerada Afghaaniyiinta dalka kusoo laabanaya, qaxootiga, iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka. Ayada oo Militariga Mareykanka ay ka baxayaan Afghanistan, ballan-qaadkeena joogtada ah wuu cad yahay. Waxaan baaqi kusii ahaan doonnaa inaga oo adeegsaneyna diblomaasiyad buuxda, dhaqaale iyo kaalmo, inaan taageerno mustaqbal nabadeed iyo mid xasilloon oo shacabka Afghanistan ay mudan yihiin,” ayuu ku daray Xoghayaha Arrimaha Dibedda.
“Waxaan ku boorineynaa hogaamiyayaasha Afghanistan iyo Taliban inay dedejiyaan horumarka ku wajahan heshiis siyaasadeed oo laga xaajooday iyo xabad-joojin dhameystiran oo joogto ah, si loo soo afjaro in ka badan 40 sano oo dagaal ah, loona abuuro xaalado u ogolaan doona qaxootiga inay si nabdoon ugu soo noqdaan guryahooda.”